Ubuhle obulula emfuleni e-Jemez Springs, NM - I-Airbnb
Ubuhle obulula emfuleni e-Jemez Springs, NM
Jemez Springs, New Mexico, i-United States
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Nick
U-Nick Ungumbungazi ovelele
Ehlotshiswe emfuleni wentaba opholile phakathi namawa amakhulu amahle kakhulu nokuzola kwentaba, i-Dragonfly Cottage ijabulisa abantu abathanda imvelo. Indlwana isemfuleni i-Jemez edolobhaneni lase-Jemez Springs, e-New Mexico, engumakhelwane ne-Jemez Mountain Trail enhle.
I-Dragonfly Cottage iyindawo engcwele yezintaba, enikeza indawo enokuthula nokunethezeka yezihambi ezifuna okokuzithokozisa kwangempela kwase-New Mexico.
Senza izivakashi zethu zibe nezindawo zokuhlala ezithokomele nezangasese ngaphansi kwezinkuni ezindala namawa amahle, siziqhayisa ngakho konke ukunethezeka ekhaya. Ukuze kube lula kuwe, i-Dragonfly Cottage inikeza isimo sekhaya, okuhlanganisa ikhishi elinakho konke, indawo yokubasa umlilo yezinkuni, i-grill yegesi kanye nompheme omkhulu, we-redwood obheke isigodi sase-Jemez.
Izilwane ezifuywayo eziphethwe kahle zamukelekile, kodwa kumelwe zibe semshinini lapho zingaphandle futhi zidatshulwe lapho zishiywa zodwa endlwaneni. Siyakucela ngenhlonipho ukuthi uhlanze ngemva kwezilwane zakho ezifuywayo.
I-Dragonfly Cottage yikhaya leholide langasese nelizimele elihlezi phakathi komfula wezinhlanzi zasendle noMfula i-Jemez Ezintabeni zase-Jemez -- ngaphezu nje kwehora usuka e-Albuquerque noma ihora nengxenye usuka e-Santa Fe, e-New Mexico. I-Dragonfly Cottage iyindawo ekahle kakhulu "yokukhempa" kohambo lokuya enyakatho ne-New Mexico kanye nendawo yokufihla ethandwayo ye-honeymooning entsha, ama-familes, amaqembu amancane noma abantu abashadile abafuna ukuvakasha okuthakazelisayo, okuzimele.
I-Dragonfly Cottage iyindlu engenawo umusi, eyimfihlo, enamakamelo okulala amabili kanye nekhaya elilodwa leholide legumbi lokugezela. Izindawo zaphansi zezitini ezinokushisisa phansi okukhanyayo, amakhabethe e-pine enziwe ngezandla kanye nethayili yobumba kwenza indawo ethokozisayo endlwaneni yethu encane, enesikwele esingu-800 kuyilapho amafasitela eletha idwala elimangalisayo nokubukeka kwesigodi somfula. Kunemibhede emibili emikhulu, kanye negumbi lokugezela elilodwa elinobhavu neshawa. Kukhona nomatilasi ophekuzelayo (usayizi ogcwele) otholakalayo ukuze usetshenziswe egumbini lokuphumula. Futhi kulabo abafuna ukulala nezinkanyezi ngenhla kwamakhanda abo, letha izikhwama zakho zokulala ukuze uzibeke kudekhi ye-redwood. Umpheme unweba cishe kusukela ohlangothini olulodwa lendlwana kuya kolunye; umfula udlula nje phansi ebhange. Yiza nokudla okungokwakho futhi ulungiselele ukudla ekhishini lethu elinakho konke. Izindawo zokudlela zendawo ziyatholakala futhi endaweni. I-Dragonfly Cottage iyindawo ekahle kakhulu yokwenza izinkumbulo zomndeni!
4.89 · 27 okushiwo abanye
Kunezinto eziningi ongazenza endaweni yase-Jemez Springs. Ezihambini ezisebenzayo, ukukhetha akupheli. Ukusuka ekuqwala izintaba kuya ekugibeleni ngebhayisikili kanye nokuqwala amadwala phakathi nezinyanga ezifudumele, kuya ekugibeleni eqhweni kanye nokushushuluza eqhweni phakathi nenkathi yasebusika. I-Valles Caldera inikeza izindawo ezinhle kakhulu namamayela emizila yokuqwala izintaba. Uma ukuphumula kuyilokho okufunayo, kuneziphethu ezihlukahlukene zemvelo ezishisayo endaweni yokuhlola nokuzijabulisa, noma umuntu angafunda incwadi ngenkathi ephumula kudekhi ye-redwood enomthunzi. Kumdlali wezemidlalo wangaphandle, ukudoba e-Fenton Lake noma komunye wemifudlana eminingi endaweni kuqhele ngebanga nje elifushane. Kukhona okuthile kuwo wonke umuntu ngenkathi evakashela i-Jemez Springs.
UNick Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Jemez Springs namaphethelo